Castle Almodóvar, Egwuregwu nke n'ocheeze na Spain | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Córdoba, España
Egwuregwu ocheeze ọ ghọrọla usoro kpochapụwo mgbe ochie na usoro nke ihe eji eme ihe onyonyo. Edere ọtụtụ n'ime ya na England mana ejirila ebe ndị ọzọ na Europe mee ihe, yabụ, na Spain, ndị na-emepụta ihe ejirila ụlọ ị hụrụ na foto ahụ.
Ọ bụ ihe Lelọ nke Almodóvar del Río, ebe mara mma ma sie ike na Córdoba nke sitere na Muslim. Ọ bụ ihe a ma ama ma ebe ọ bụ na ọ na-apụta n'usoro ọ ghọrọ ihe na-egbu maramara, ọkachasị n'etiti ndị na-akwado ya. Yabụ, ọ bụrụ nro ị na-eleta ya, ebe a ka anyị hapụrụ gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya.
1 Akụkọ banyere lelọ nke Almodóvar del Río
2 Kedu ka Castle nke Almodóvar del Río dị
3 Gaa na Castle nke Almodóvar del Río
Akụkọ banyere lelọ nke Almodóvar del Río
Nke a siri ike nwere Roman na Muslim gara aga na ihe mbu emere tupu afọ 760. Ọtụtụ narị afọ! Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-ekwu na ebe a enwere ebe obibi Iberian-Turdetan, nke ewusiri ike ma bụrụ nke a raara nye maka mbupu ngwaahịa mpaghara dị ka ọka ma ọ bụ mmanụ. Ndị Rom amatala nke a, mana ọ bụ ndị Alakụba, Umayyads, bụ onye wuru ebe ewusiri ike na 740.
Nke a ka a kpọrọ Al-Mudawar ma ọ bụụrụ aha ahụ bụ Almodóvar. Ọ gafere n'aka Spanish n'okpuru okpueze Fernando nke Atọ na 1240 ma site na mgbe ahụ gaa n'ihu ndị eze dị iche iche jiri ya. You na-echeta usoro Spanish a ma ama site na 80s, Fuenteovejuna, nke dabere na akụkọ ihe mere eme n'ezie na egwuregwu nke Lope de Vega? Ọfọn, obodo ahụ na Castle Almodóvar rụrụ ọrụ ego maka ịzụta Fuente Obejuna na 1513, ọ bụ ezie na ọ mechara laghachi na okpueze ahụ. N'oge ụfọdụ na narị afọ nke iri na asaa, otu okpueze ahụ nwere ihe onwunwe a wee wepụ Almodóvar na ụlọ ya wee bụrụ onye isi nke Order of Santiago.
Nnukwu ụlọ dabara na gbahapụrụ ma ọ bịaruru narị afọ nke iri abụọ fọrọ nke nta ka ọ ghọọ ùkwù mkpọmkpọ ebe. Ọ bụ mgbe ahụ, na mmalite nke narị afọ, na XII Count nke Torralva bidoro nwughari. Ọrụ ndị ahụ gara n'ihu ruo ntiwapụ nke Agha Obodo. Mgbe ahụ, aha onye nwe ọnụ na ihe onwunwe ahụ ketara site n'aka onye ikwu, n'ikpeazụ Marques de la Motilla, bụ onye ezinụlọ ya ka dị taa.
Kedu ka Castle nke Almodóvar del Río dị
Nnukwu ụlọ Ọ dị n’elu otu ugwu nke dị otu narị na iri abụọ na otu n’ogologo, na-ele anya n'obodo Castillo de Almodóvar del Río. Na ngụkọta enyene ebe nke 5628 square mita. na mgbidi ahụ dị ihe dị ka mita 500 n’ogologo na ọtụtụ ụlọ elu nke n’oge ha mere ka ebe e wusiri ike nke a na-apụghị imeri emeri gbanwee.
La ụlọ elu ụtụ Ọ dị na nsọtụ ndịda nke mgbagwoju anya ma dị elu nke 33 mita. Ọ bụ ụlọ elu dị iche na ebe ewusiri ike, ọ bụ naanị ya na akwa mmiri dị warara nke a na-eche n'oge ya iji mee osisi na ndị na-ese ihe, nke kachasị mma iji kewapụ onwe ya kpamkpam ma ọ bụrụ na mwakpo. Ọ bụ ụlọ elu nwere okpukpu anọ, nke nwere okpukpu anọ, yana ụlọ mkpo, nnukwu ọnụ ụlọ, ime ụlọ dị n'etiti na mbara ala.
Taa, n'ime ụlọ ị ga-ahụ ndị mannequins na-eme ka hà bụ ndị mkpọrọ nke ụlọ mkpọrọ ochie na oghere dị n'ime ala nke ị nwere ike ịhụ ụlọ mkpọrọ gbara ọchịchịrị.
Isi ụlọ nke Torre del Homenaje dị n'ụdị Gothic, nke nwere corbels etinyere na ihe ọkụkụ osisi na mpi n'akụkụ nke na-eme oghere oghere octagonal. Karịsịa bụ mbara ụlọ nke nwere echiche na-enweghị atụ nke ndagwurugwu Gualdalquivir. N'aka nke ọzọ enwere Torre Gburugburu, nwere ntọala prismatic, na o doro anya na ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị. O nwere okpukpu abụọ, nke elu ya na gbọmgbọm vault na nke dị ala nke e ji brik rụọ.
Enwekwara ndi Ụlọ elu Moorish na-ele anya na obodo na nwere ịnyịnya arches na Ulo elu ulo nke dị n'akụkụ ugwu ugwu ọwụwa anyanwụ ma nwee ala abụọ, otu n'ime ha taa na-eje ozi dị ka onye na-agba egbe na nke ọzọ ya na eserese Mudejar oge ochie. Maka akụkụ ya Towerlọ Akwụkwọ .lọ Akwụkwọ O nwekwara okpukpu abụọ ma taa ha na-edebe ihe ngosi nke foto nke nnukwu ụlọ tupu na mgbe nwughari ya. Ọ ga-ekwe omume ịrịgo na mbara ala ahụ wee nwee obi ụtọ na echiche nke akụkụ ugwu.
La Towerlọ Elu na-ege Ntị Ọ bụ obere ụlọ elu dị ezigbo mma ma jiri ya chọpụta mwakpo mberede na nnukwu ụlọ. Na Towerlọ elu mgbịrịgba O nwekwara ezigbo ọnọdụ zuru oke ma n'ime taa ị nwere ike ịhụ akụkọ vidiyo banyere Count nke Torralva bụ onye na-ahụ maka nwughari nke nnukwu ụlọ mara mma. Na Ash Tower Ọ bụ ụlọ ọzọ. A na-ekwu na n'oge ọ dị elu, nnukwu ụlọ ahụ nwere mgbidi abụọ na atọ. N'ezie, ebe ọ dị mere ka iwu nke moats bụrụ ihe na-adịghị mkpa.
Ntọhapụ nke ịhapụ ụlọ ukwu ahụ ji nwayọọ nwayọọ malite na narị afọ nke XNUMX ọ bụkwa ya mere na mmalite narị afọ nke XNUMX ka mkpa mweghachi dị ngwa ngwa. N'ime ọrụ ndị a, ndị nwugharị ahụ gbakwunyere uka, na ọbá akwụkwọ na eze na-ele ndagwurugwu Guadalquivir anya na ọdịda anyanwụ ya.
N'obí nwere asymmetrical facade na-adọta a otutu anya mgbe ị na-ele ya anya n'ụzọ zuru ezu. N'ime, n'ime ime ụlọ, ị ga-ahụ nnukwu ọkụ na-acha ọcha nke dị n'ụdị Anglo-Saxon. A malitere iwu ụlọ ụka ahụ, n'etiti etiti Patio de Armas ahụ na 1919 wee kwụsị na 1934. Ọ bụ octagonal ma nwee ọmarịcha neo-Mudejar dome nke sitere na nke Convent nke San Pablo, na Seville.
Ọbá akwụkwọ ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ebe ndị ọzọ e wusiri ike n'ihe gbasara ụdị nka. Ọ dị mita iri na abụọ na ọkara n’ogologo, na ọkara n’ogologo na asaa n’obosara. Ejiri osisi mara mma nke ukwuu ma nweekwa ebe anọ ọzọ na-egosipụta nka neo-Mudejar.
Patio de Armas nwere, na mgbakwunye na ihe mgbakwunye agbakwunyere na narị afọ nke XNUMX, olulu mmiri abụọ nke n’oge ahụ nyere ụlọ ọrụ a ohere ịchekwa ụfọdụ 290 puku lita mmiri ozuzo ma obu site n’osimiri n’onwe ya. N'ikpeazụ, N'otu oge ahụ, etinyere ụlọ elu ọzọ na nnukwu ụlọ ahụ, nke itoolu, nke a na-akpọ Small Tower.
Gaa na Castle nke Almodóvar del Río
Ọ dị nso na obodo Córdoba, n’obodo Almodóvar del Río na n’elu ugwu. N'ugwu a ị nwere ike ịga ije, jiri ụgbọ ala ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe. Mgbatị ahụ adịghị ogologo ma ọ bụ nkpoda. N’elu ụlọ e nwere nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala iji nwee ike ịhapụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụgbọ ala ahụ. E nwere ụzọ abụọ ị nwere ike iso, nke a zọchara ụkwụ na nke ọzọ anụ ọhịa na-agafe ubi ahụ. Ha abụọ nwere echiche dị ebube nke ime obodo, obodo, ndagwurugwu na osimiri.
Ozugbo ị ruru n'elu ihe niile na tupu ịbanye ị nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ ya, iji nwee ike ịghọta ebe e wusiri ike site n'èzí. Ozugbo n'ime ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche nke ịgagharị agagharị: Ndị a na-eduzi ndị njem site na Count nke Torralva, ndị a na-eduzi ndị njem site na Mayor’s Mayordomo na ndị na-abụghị ndị njem.
Nleta Na-enweghị Nduzi- na-aga n’ụzọ nke gị n’onwe gị site n’enyemaka nke maapụ enyere gị na tiketi ahụ. Ke ofụri ofụri, ị nwere ike ịga dum ụlọ ma e wezụga n'ihi ndị ahụ oghere debeere nanị maka eduzi njegharị. You ga-agafe ọtụtụ ime ụlọ isiokwu iji ghọta ihe mere na nnukwu ụlọ (ngwa agha eze, ụlọ eji ejiji eze na dungeons, dịka ọmụmaatụ). E nwere atụmatụ ọdịyo na ụdị di na nwunye, otu nke na-egosi nnọchibido nke nnukwu ụlọ na nke ọzọ bụ holographic na nke Marquis n'onwe ya pụtara na-akọwa ụfọdụ akụkọ. Nwere ike ịgbakwunye otu njem site na Ogige Ugbo, tinyere mpaghara ise. Ọnụahịa ahụ bụ euro 8.
Nduzi nke Eze Butler na-eduzi: ọ bụ nleta pụrụ iche ebe onye ọrụ ntụkwasị obi nke Pedro m na-eso gị gafee ụlọ niile nke ụlọ a. Tiketi na-efu euro 13 ma na-ewere ọnọdụ na ngwụsị izu ọ bụla na ezumike na elekere 12 nke ehihie.
Na-eduzi Njem site na Count nke Torralva: bụ njem nlegharị anya nke egwuregwu ọzọ ebe XII Count nke Torralva n'onwe ya, onye na-ewughachi nnukwu ụlọ, na-eduzi gị site na ya, na-akọwa ndụ ya, oge ọ bụ nwata, ihe ọ chọrọ, ihe mkpali ya ịmalite ọrụ a na ọ hụghị ka agwụchara. Nleta a nwere ọnụahịa nke euro 15 ma na-enyekarị ya n'etiti 12 na 14.
Iji lelee ụbọchị na oge nke nleta a gosipụtara, ana m akwado ka ị gaa na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ eze tupu ị gawa. Ga-ahụkwa ihe dị iche iche na imerime eme na nnukwu ụlọ na-emekarị na-ahazi na-emeghe ochie mgbe ụwa ka ị na omenala ha nye ndị ọbịa: Days of Historical Recreation, ọzụzụ na ochie ọgụ, ochie nri ehihie na kediegwu, ehihie na abalị nke Nwa ọnwa.
Ah, achọghị m ichefu. Na Game nke n'ocheeze ụlọ mara mma bụ ụlọ nna ochie nke Tylọ Tyrell.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Castle Almodóvar, Egwuregwu nke ocheeze na Spain